1 विवाह मेकअप - दुलही को छवि को विकास मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रिपेरेटरी कदम को एक। यो पोशाक र चुनिएको शैली अनुरूप, उनको व्यक्तित्व र सौन्दर्य जोड गर्नुपर्छ। विवाह मेकअप लागि मैट प्रभाव संग एक स्थिर, उच्च गुणस्तरीय कस्मेटिक्स चयन गर्न आवश्यक छ। glare स्रोत - चमक प्रयोग गर्न प्रयास गर्नुहोस्, यो छ। र दिन भर मेकअप अप छुन र रोचक फोटो को मद्दतले मा प्राप्त गर्न एउटा सानो मेकअप झोला संग लो।
2. कि यो पोशाक संग संयुक्त छ खातामा लिनुपर्छ विवाह फूलगुच्छा छनौट गर्दा दुलही को, बाल (यदि यो वास्तविक फूल प्रयोग गर्दछ) बनाउन-अप र यसको विशेष आकार र दिन भर आफ्नो फारम र ताजगी राख्नुहोस्। केटी त्यो अलिकति अगाडि ढल्केको कमर स्तरमा शूटिंग मा राख्न भनेर, अग्लो र पातलो फिट ठूलो क्यासकेडिङशैलीपाना फूलगुच्छा छ।
कम दुलही क्लासिक गोल आकार बनेको एउटा सानो विवाह फूलगुच्छा, आदेश राम्रो छ।
को curvaceous संग केटी - drooping तन्तु एक फूलगुच्छा र बगिरहेको stems।
लामो सीधा संग फूल-छड एक फूलगुच्छा को पतलून सुट वा विवाह पोशाक सीधा छाँयामा संग blending, stems।
दुल्हन फूलगुच्छा र boutonniere दुलहा एक शैलीमा डिजाइन गरिएको हुनुपर्छ।
दुल्हन फूलगुच्छा हुँदैन भारी - यो सबै दिन भर बोक्न हुनेछ।
दुलही एक keepsake रूपमा उनको फूलगुच्छा छोड्न चाहन्छ भने, तपाईं आफ्नो अविवाहित प्रेमिका यसलाई फेंक एक फूलगुच्छा understudy आदेश गर्न सक्नुहुन्छ।
सुन्दर मौसम मा 3. दुलही अक्सर विवाह पोशाक न्यानो मेन्टल चयन गर्नुहोस्। यसलाई यो केप मा एक प्रकार को वृक्ष छोड्न हुनेछ कि हेर्न अग्रिम आवश्यक छ , दूल्हा सुट को।
4 यो अग्रिम मा दुलही विवाह सामान (पन्जा, आभूषण, पर्दा, garter, प्रशंसक, हाते झोला) को घर मा तस्वीर लिनका लागि तयार गर्न सकिन्छ, छल्ले, जूता, फूल, एक पोस्टकार्ड। पछि फोटो एल्बम सजाउनु हुनेछ जुन फोटो।
रजिस्ट्री कार्यालयमा5लें तस्वीर यसको originality द्वारा प्रतिष्ठित छ। प्रिय जवान, विवाह दर्ता समयमा, कृपया ढिलो हुन, फोटोग्राफर धेरै पटक यो घटना हरेक क्षण रेकर्ड र विभिन्न कोण बाट गोली समय खोजे। प्रत्येक चरण (चित्रकला, लाउने छल्ले, वैवाहिक प्रमाणपत्र को प्रस्तुति) पछि फोटोग्राफर खुसी नजर हेर्न। मुस्कान! फोटोग्राफर तिनीहरूलाई बन्द गर्न ताकि, छल्ले लगाउन घरमा अभ्यास। छल्ले को विनिमय को समयमा त्यो भूल छैन, छैन केवल दुलही हातमा ध्यान, तर दुलही को हात। तिनीहरूलाई उत्तिकै राम्रो groomed हेर्न बनाउन मनमोहक छ।
6 तिनीहरूले गतिविधिहरु अतिथि समन्वय कि साक्षी वा नातेदार को काँध मा आफ्नो विवाह चिन्ता राख्नुहोस्।
7 विचार र विवाह पैदल राख्न आफ्नो फोटोग्राफर संग छलफल। तपाईं बस तपाईं लागि परम्परागत ठाउँहरू वा कुनै विशेष, महंगी को पृष्ठभूमिमा (पहिलो बैठक को स्थान, स्मरणीय घटनाहरू) तपाईं सुखद सम्झनाहरु लागि भनेर naveyut आफैलाई हेर्न चाहन्छु। एउटा व्यावसायिक फोटोग्राफर यसलाई तुरुन्तै समाधान हुनेछ।
निस्सन्देह, सुन्दर वास्तुकला, आंतरिक र जीवन्त, प्रकृति मा भावनात्मक को पृष्ठभूमिमा तस्वीर हुनुपर्छ।
र यदि तपाईं प्रतियोगिताहरु, दुलही गरेको फूलगुच्छा tossing प्ले, दुलहा garter प्रकृति, रेस्टुरेन्ट को कहाँ प्रकाश, कोण को एक किसिम को लागि ठाउँ प्रशस्त र गाढा छैन, नियम, रिक्त स्थान सीमित छ।
सेट समय एक पैदल लागि दिइएको छ, तर यस्ता कर्मचारी को परिदृश्य साथै फोटोग्राफर को भाग मा, तर पनि दुलही र दुलहा को भाग मात्र छैन तयार गर्नुपर्छ।
दुलही आफ्नो खुट्टा मा सबै दिन खर्च हुनेछ भनेर खातामा लिन, यो सहज जूता को हेरचाह गर्न आवश्यक छ।
8 तपाईंले दुलही र दुलहा तस्वीर खिच्दा भने सामान प्रयोग गर्नेछ, चित्र को एक किसिम प्राप्त गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, वर्षा मा - स्पष्ट वा सेतो छाता। गर्मी मा - दुलही लागि प्रशंसक वा बेल parasol। बाहिर plaid सुट र फल, रक्सी र रक्सी चश्मा को एक टोकरी शूटिंग लागि। तपाईंको कल्पना असीम छ!
9 आफ्नो भावना लुकाउन नगर्नुहोस्! मुस्कान, हाँस्न, आनन्दित, आनन्द संग रुन्छ! तपाईंको artistry सबै देखाउने! प्ले! र तपाईं अद्वितीय, सुन्दर, भावनात्मक फोटो संग पुरस्कृत गरिनेछ।
10 त्यहाँ तपाईं को लागि एक फोटोग्राफर निमन्त्रणा छ भने आफ्नो इच्छा, फोटो खिंचवाने छ भने "थियो निशान," त्यसपछि, को पाठ्यक्रम, उहाँले नै काम गर्दैन। आफ्नो फिर्ता सीधा पछि सबै, सारा दिन, आफ्नो अनुहार अभिव्यक्ति हेर्न मुस्कान गर्न को लागि: सँगै तपाईं सँग, तपाईंको इच्छा र काम, हाँ यो काम, काम धेरै समय-खपत मोडेल छ किनभने छ। यो तपाईं ऐनामा हेर्न अघि तपाईं एक विशेष स्थिति मा दिखेगा दिन भनेर मनमोहक छ? तपाईं slimmer हेर्न चाहनुहुन्छ, क्यामेरा एक मामूली कोण मा उठ। तपाईं उहाँले यो दृष्टिकोण, एक पेशेवर, तपाईं, बारी मा, देख्न गर्छ किनभने एक फोटोग्राफर, बारी वा उनको टाउको उठाउन उसलाई सुन्न भन्छन् भने गर्न सक्छन् तपाईं peeps डबल चिउँडो घाँटी वा झुर्रियाँ। फोटोग्राफर कुनै पनि विशेष ठाउँमा जाने सोध्छन् भने, तपाईं उहाँलाई इन्कार गर्नु हुँदैन, सबै भन्दा संभावना छ, उहाँले देख्नुहुन्छ कि यो स्थान राम्रो प्रकाश वा पृष्ठभूमिमा। फोटोग्राफर र दुलही र दुलहा को संयुक्त काम मात्र ठूलो परिणाम निम्त्याउन हुनेछ!
11 photographing को दृष्टिकोण देखि, रेस्टुरेन्ट विवाह पार्टी चयन लागि धेरै महत्वपूर्ण क्षण। यदि सम्भव छ भने, एक प्रकाश कोठा र कुनै दर्पण छत चयन गर्नुहोस्।
प्रिय नवविवाहितहरूका, तपाईंले आफ्नो जीवनको यस महत्त्वपूर्ण दिनको लागि तयार गरिएको छ। त्यसैले एक छुट्टी व्यवस्था - एक सानो परी कथा! तर उत्सव को खाएको केक परिवार र साथीहरू पछि समाप्त हुनेछ, तर उदास हुन छैन! आखिर, आफ्नो फोटोग्राफर तपाईं गर्न तस्वीर सारा छुट्टी प्रस्तुत हुनेछ। र पनि ती क्षणमा तपाईं विवाह समारोह संग व्यस्त रहेको छैन देखेको छ,। बित्तिकै सधैंभरि एक स्मृति रूपमा!
चर्च पात्रोमा Ulyana नाम दिन। सुविधा नाम
"Daghestan" - को कैस्पियन Flotilla को परियोजना 11661 को जहाज। फोटो र युद्घ सामांग्री मिसाइल जहाज "Dagestan"
उत्तेजना - यो छ ... प्रोत्साहन
पत्थर तेल: समीक्षा र विवरण
को अमेजन जहाँ बग्छ? नदी डेल्टा र अन्य सुविधाहरू
व्लादिमीर पाउडर - प्रसिद्ध गायक को भाइ